बच्चाले जन्मिए लगत्तै डाक्टरको मास्क तानेको तस्विर भाइरल……. – Dainik Sangalo
बच्चाले जन्मिए लगत्तै डाक्टरको मास्क तानेको तस्विर भाइरल…….
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ३०, २०७८ समय: ११:५८:५७
हामी सबैलाई थाहा छ कि,यो महामारीको समयमा मास्क कति धेरै आवश्यक छ । डाक्टरका अनुसार मास्कले मानिसका लागि भ्याक्सीनको काम गरिरहेको छ ।
यसैबीच हालै जन्मिएका एक शिशुलाई मास्क कति आवश्यक छ भन्ने कुरा के थाहा । तर बच्चाले भने जन्मिए लगत्तै डाक्टरको मास्क तानेका छन् ।
.दियो बाल्दा सधै ध्यान राख्नुहोस् यी ५ कुरा, मिल्छ चमत्कारी फल
हिन्दू संस्कार अनुसार हरेक घरमा पुजा पाठ गरिने गरिन्छ। पुजा पाठ गर्नु परम्परागत नियम हो। शास्त्रमा पुजा पाठ गर्ने समयमा केही नियम बनाइएको छ।
तपाई पुजा गर्ने समयमा दिप अवश्यक बाल्ने गर्नु भएको हुनसक्छ। हिन्दू संस्कार अनुसार पुजामा दिप बाल्नु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। दिप बाल्दा घरमा नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने र सकारात्मक उर्जाले प्रवेस गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।
दिप बाल्दा देवी देवता पनि प्रसन्न हुने र सबै नराम्रो शक्ति हटेर जाने विश्वास गरिदै आइएको छ।
Last Updated on: September 15th, 2021 at 11:58 am